Madagasikara: manahy ny hiverenan’ny korontana ny mponina taorian’ny fialan’ny filoham-pirenena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Avrily 2009 11:54 GMT
Ankehitriny dia ny anankiray izany (Rajoelina).
Tonga eo amin'ny fiafarany ny fifandrohitana fahefana teto Madagasikara hatramin'ny volana janoary no mankaty. Omaly alarobia mantsy, taorian'ny fanandramana nataon'ireo mpanara-dia an'i Andry Rajoelina hanala an-dRavalomanana eo amin'ny fitondrana, dia nandray ny fanapahana ny lapam-panjakana tao Ambohitsirohitra ny tafika, izay lasa niandany tamin'i Andry Rajoelina.
Ora vitsivitsy tato aoriana dia nametra-pialana ofisialy i Marc Ravalomanana ary namindra ny fahefana ho amin'ny miaramila ahitana jeneraly 4 natokisany hatramin'izay. Tsy nanaiky izany anefa Rajoelina ka nosamborin'ny miaramila izay efa mpanara-dia azy ireto jeneraly ireto, niaraka tamin'ny mpitandrina iray nanampy tamin'ny fanelanelanana. Nokapohina ity mpitandrina ity rehefa avy eo.
Asehon'ny sary mihetsika hoe ahoana ny fomba nampijalian'ireto miaramila ireto ireo jeneraly ireo ary mampahatsiahy antsika fa ahiana ny herisetra amin'ny firenena mizarazara.
Marobe ireo fety fankalazana ny fialan-dRavalomanana tamin'ny lalana maro tao Antananarivo.
Kanefa ny mpanara-dia an-dRavalomanana koa dia efa nanomana fihetsiketsehana io alarobia io hanoheran'izy ireo ity “fanonganam-panjakana” ity.
Miaramila Malagasy ao Antananarivo
Eo amin'ity kihon-dalana ity dia tsapa fa mizarazara sady mihenjana ny tady ny amin'izay mety avoakan'ny ampitso eo amin'ireo mpitoraka bilaogy Malagasy.
Ilay mpanao gazety sady mpitoraka bilaogy, Mialy Randriamampianina, no nilaza ny tahony tao amin'ny Voice of America:
Tsy fantatra izay tena marina satria hatramin'izao dia tsy manana vaovao mari-pototra isika momba ny fihetsiketsehana hatoan'ireo mpanara-dia an-dRavalomanana sy ny amin'izay mety hataony. Ary koa, mbola manahy ny hiverenan'ny korontana ataon'ny mpanara-dia an-dRavalomanana sy Andry Rajoelina izahay. Nisy fifandonana mantsy teo amin'ny 2 tonta mpifanandrina herinandro lasa izay. Noho izany dia miteraka olana foana ny fihetsiketsehana tahaka ireny ka manahy ny hisian'ny herisetra ao amin'ny firenena izahay.
Ilay mpitoraka bilaogy, Lomelle, no naneho ny fihetseham-pony tao amin'ny gazety Le Monde, na dia “faly” aza izy fa niala Ravalomanana (fr):
Tsy fantatra mihitsy izay hataon'ny mpanohitra. Manahy zavatra ratsy aho. Tsy manana toetra maha-filoha mantsy i Andry Rajoelina. Mbola tanora loatra izy ary tsy ampy traikefa. Manahy ny fahaizamanaony amin'ny fitantanana ny firenena aho.
Faly ny Madagate fa tsy milalao intsony Ravalomanana ary i Andry Rajoelina no filoha mitarika ny HAT (Fitondrana Avon'ny Tetezamita)(fr):
Nolavin'ireo notolorany ny fahefana Ravalomanana, ilay mpivarotra ronono kely avy any Imerinkasinina. Tsy te hanolotra ny fanahiny ho an'ny devoly mantsy izy ireo. Izay ny amin'ny filoham-pirenena izay efa nanmpiseho ny tena endriny marina. Arakaraky ny filalaovany afo sy fanompoany sampy no nahamay azy. Tena adin'ny maizina sy ny mazava mihitsy izy ity.
Zavatra hafa mihitsy kosa ny an'i Jentilisa(mg):
Mahita i Hery fa tsy ho ato ho ato ny fandriam-pahalemana aty Madagasikara na dia eo aza ny fiovana politika (mg):